PentaCoin စျေး - အွန်လိုင်း PTA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PentaCoin (PTA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PentaCoin (PTA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PentaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PentaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PentaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PentaCoinPTA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00233PentaCoinPTA သို့ ယူရိုEUR€0.00198PentaCoinPTA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00179PentaCoinPTA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00213PentaCoinPTA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0212PentaCoinPTA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0147PentaCoinPTA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0516PentaCoinPTA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00869PentaCoinPTA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00311PentaCoinPTA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00326PentaCoinPTA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.053PentaCoinPTA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0181PentaCoinPTA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0123PentaCoinPTA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.175PentaCoinPTA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.389PentaCoinPTA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0032PentaCoinPTA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00352PentaCoinPTA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0724PentaCoinPTA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0163PentaCoinPTA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.247PentaCoinPTA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2.78PentaCoinPTA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.886PentaCoinPTA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.172PentaCoinPTA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0648
PentaCoinPTA သို့ BitcoinBTC0.0000002 PentaCoinPTA သို့ EthereumETH0.000006 PentaCoinPTA သို့ LitecoinLTC0.00004 PentaCoinPTA သို့ DigitalCashDASH0.00003 PentaCoinPTA သို့ MoneroXMR0.00003 PentaCoinPTA သို့ NxtNXT0.194 PentaCoinPTA သို့ Ethereum ClassicETC0.000328 PentaCoinPTA သို့ DogecoinDOGE0.692 PentaCoinPTA သို့ ZCashZEC0.00003 PentaCoinPTA သို့ BitsharesBTS0.0899 PentaCoinPTA သို့ DigiByteDGB0.0891 PentaCoinPTA သို့ RippleXRP0.00778 PentaCoinPTA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00008 PentaCoinPTA သို့ PeerCoinPPC0.00848 PentaCoinPTA သို့ CraigsCoinCRAIG1.09 PentaCoinPTA သို့ BitstakeXBS0.102 PentaCoinPTA သို့ PayCoinXPY0.0419 PentaCoinPTA သို့ ProsperCoinPRC0.301 PentaCoinPTA သို့ YbCoinYBC0.000001 PentaCoinPTA သို့ DarkKushDANK0.769 PentaCoinPTA သို့ GiveCoinGIVE5.19 PentaCoinPTA သို့ KoboCoinKOBO0.546 PentaCoinPTA သို့ DarkTokenDT0.00215 PentaCoinPTA သို့ CETUS CoinCETI6.92